Ninkii Nasiib u yeesha gabadhii bashimahaan leh yuusan iska deen waa Naagta ugu Dareenka badan Aqriso. | shumis.net
Home » galmada » Ninkii Nasiib u yeesha gabadhii bashimahaan leh yuusan iska deen waa Naagta ugu Dareenka badan Aqriso.
Ninkii Nasiib u yeesha gabadhii bashimahaan leh yuusan iska deen waa Naagta ugu Dareenka badan Aqriso.
waxaynu idiin heynaa Barnaamij muhiim ah oo ka hadlaya Quruxda iyo Dareenka faruuryaha ama bashimaha Dumarka Khubaro u dhalatay Dalka Imaaraadka Carabta, ayaa waxa ay daraaso ku xaqiijiyeen in dumarka bishimaha ama Faruuraha dheer ay ka dareen badan yihiin kuwa Bishimaha yar yar.
Dr. Khalid bin Salmaan oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta, ayaa waxa uu sheegay daraaso ay sameeyen inay ku Ogaaden in dumarka bishimaha dheer ay ka dareen badan yihiin kuwa yar yar, Wuxuuna sheegay in dumarka ay ku kala duwan yihiin jirka qaar.
‘’Waa hubaal in dumarka bishimaha dheer ay ka dareen badan yihiin kuwa yar yar, waxan daraaso ku sameynay in kabadan 1,200 dumar u kala dhashay Caalamka weyna kusoo
baxday Astaamaha aan beegsanay’’
Sidaa waxaa yiri Dr.Khalid bin Salmaan.
Dhanka kale, Prof Tamir Faisal oo kamid ah Khubarada sameeyay daraasada ayaa waxa uu sheegay in Dumarka Bishimaha dheer ay yihiin dumar gob ama qaali ah, wuxuuna sheegay in Daraasadda ay tahay mid xaqiiqo ah oo aan shaki lagalin Karin.
‘’Tijaabo uma baahno waa daraaso dhab ah oo la fuliyay’’ sidaa waxaa yiri Prof Tamir Faisal.
Daraasadaani ayaa ah mid cusub oo aan horay loo shaacin, waxa ayna Khubaradu sheegen in loo baahan yahay in dadka daneeya Arrimaha Bulshadda ay tijaabiyaan.
Title: Ninkii Nasiib u yeesha gabadhii bashimahaan leh yuusan iska deen waa Naagta ugu Dareenka badan Aqriso.